Sarkaal ka tirsanaa kooxda Daacish ee Somalia oo ku dhex dhintay Xabsiga Dhexe ee Xamar… – Hagaag.com
Sarkaal ka tirsanaa kooxda Daacish ee Somalia oo ku dhex dhintay Xabsiga Dhexe ee Xamar…
Warar ayaa sheegaya in sargaal katirsanaa Kooxda Daacish faraceeda Soomaaliya horeyna loogu riday xukun dheer oo xabsi ah uu ku dhax geeriyooday Xabsiga Dhexe ee Xamar.
Mahad Maxamuud Abuu Yaasiin oo heestay dhalashada Ruushka ayaa maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ku xukuntay 15-sano oo xabsi ciidan ah kadib markii lagu helay in uu Daacish katirsanaa uuna doonayay in garab cusub aas aaso.
Sida aan Wararka ku helnay maxbuuskan ayaa xabsiga dhaxe ugu geeriyooday xanuun la sheegay in ay lasoo darseen, mana jiro ilaa hada faah faahin saraakiisha xabsiga Dhexe ka bixiyeen geerida maxbuuskan.
Sargaalkan horey uga tirsanaa kooxda Daacish ee ku geeriyooday Xabsiga Dhexe ayaa la sheegay in uu tagay dalka Siiriya, waxaa sidoo kale Maxkamada Ciidamada sheegtay in uu warqad cabasho ah u qoray Hogaamiyihii la dilay ee Daacish Abuubakar Al Bagdaadi.
Xabsiga Dhexe ee Xamar ayaa waxaa horey ugu dhex geeriyooday maxaabiis dhowr oo sanado badan ku xukunaa, maxaabiista Qaarkood ayaana la sheegay in loo heystay dambiyo la xariira argagaxisinimo.